Imikhuba Emihle Yokufinyelela Kwe-imeyili Kubathonya | Martech Zone
Njengoba sigxunyekwa ochwepheshe bezobudlelwano bomphakathi nsuku zonke, sithola ukubona izindawo ezinhle kakhulu nezimbi kakhulu zokufinyelela ama-imeyili. Sabelane ngaphambilini ubhala kanjani iphimbo elisebenzayo futhi lokhu kulandelwa okuhle kulandelwa intuthuko enkulu.
Iqiniso ukuthi izinkampani zidinga ukwakha ukuqwashisa negunya lomkhiqizo wazo online. Ukubhala okuqukethwe akusenele, ikhono lokufaka okuqukethwe okuhle futhi likwabiwe kubaluleke kakhulu kuwo wonke amasu wokumaketha okuqukethwe. Ungakhokhela nokwenyuswa, kepha lokho ngeke kuthuthukise okushiwo yimvelo izinjini zokusesha ezikunakisisa.
Izikhungo zokumaketha ezifinyelela ngaphandle ezungeze ukudala nokwakha ubudlelwano obuqhubekayo ngokuletha amanye amaqembu kumkhiqizo wakho. Noma kukhuphuka imithombo yezokuxhumana kanye nokuzibandakanya kwangaphakathi nohlelo, i-imeyili ihlala ingenye yezindlela ezinamandla kakhulu zokubandakanya amaqembu omkhiqizo wakho (uma kwenziwa kahle!)
Izinyathelo Zokuthuthukisa Inqubo Yokufinyelela Nge-imeyili
Chaza Umgomo - Izinhloso zingafaka ukwazisa ngomkhiqizo, ukudala ukuthengisa, ukukhuthaza ukwabelana ngokuqukethwe (njenge-infographic), ukuhlola, ukubandakanya umphakathi, noma ukwenza isingeniso.
Khomba izethameli eziqondiwe - ngabe ukhomba ama-blogger, abanikazi besiza, izintatheli, abashicileli abanikelayo, izifundiswa, uhulumeni, noma okungenzi nzuzo?
Proofread, Test, Phinda - Qinisekisa ukuthi izixhumanisi zakho ziyasebenza, sebenzisa ukupela okulungile, uqinisekise uhlelo lolimi olufanele, bese ubhala iphimbo elifushane nelicindezelayo.
Lokhu infographic kusuka ku-Online Course Report uhamba yonke imithetho eqoqwe kuma-imeyili okufinyelela, okusebenzayo, okungasebenzi, nokuthi yini okufanele uyigweme ngokuphelele. Lokhu kufaka isikhathi sosuku, usuku lwesonto, imigqa yezihloko, amagama ozowasebenzisa, inani lemizamo, ubukhulu bomyalezo, nokuningi. Isimo esisodwa esithandekayo esabiwe kule infographic yi-blogger eyi-1 enkulu evame ukuba nomthelela ofanayo wama-blogger ama-6 amancane.
Tags: ukufinyelela kwe-bloggerusuku lwesontoimizamo ye-imeyiliimeyili Marketingumyalezo we-imeyiliukufinyelela i-imeyiliukuhlola i-imeyiliukuhlolwa kwe-imeyiliukufinyelela kwezintatheliinani lemizamoumbiko wesifundo esiku-inthanethiukufinyelelaukufinyelela imikhuba emihleusayizi womyalezo we-imeyiliimigqa yezihlokoisikhathi sosuku